Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 06/12/2019)
Wixii oo dhan safarka ah isha halkaas kuwaas oo raadinaya meelo Europe Ieexdo tareen sababta oo ah halkii aad duubi lahayd farxadaha badhaadhaha safar tareen badan diyaarad, halkan goosin ka mid ah news weyn oo aad jecelaato. safarada tareenka Yurub maalin kortaan Quluubta oo ka mid ah magaalooyinka waa weyn, aad u ogolaanaya in ay la kulmaan yaabab Yurub without breaking the bank while enjoying the unique experience of a train ride.
Here are some great meelaha Yurub Ieexdo tareen:
Rotterdam waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican Yurub Ieexdo tareen. Waxaad fuuli doonaa, waayo, qiyaastii afar saacadood, oo waxay yeelan doonaan isbedel ee tareenada ee Brussels. Ma aha in aad ku qaataan ka badan £ 185 on tigidh soo laabtay aad. Rotterdam ayaa muddo dheer nooc ka mid ah sumcad xun lagu qabto ay sabab u tahay dekedda kana leh ahayn ma aha wiish iyo weelasha maraakiibta. Recently, waxaa off gariir in sumcad iyo helitaanka dalxiisayaal inay arkaan nuurka ku ah gebi ahaan cusub. Markan agagaarka, miyaad magaalada oo jecel doonaa ay trove khasnad farshaxanka, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” Waxaa jira wax badan in la arko iyo waayo-aragnimo halkan, iyo xaqiiqda ah in Rotterdam waa Ieexdo by rail waa kaliya oo lagu daray kale.
Intaa waxaa dheer, on jidka halkaas waxaad arki doontaa caan ah beeraha Tulip, this hubaal waxaad ka heli doontaa in ay magaalada ku vibe weyn.
Qaabka ugu dhakhsaha badan si aad u hesho si ay u Antwerp waa safar ku dhowaad afar saacadood tareen oo la beddelo tareenada ee Brussels. Waxaad ma bixin doonaan in ka badan £ 87 tigidh soo laabtay taas oo cajiib ah. In kasta oo ay meel cajiib ah (magaalada ku taal soohdinta u dhaxaysa Belgium iyo Netherlands), Antwerp waa, strangely ku filan, super heli karo tareen. Waxaad xitaa ka iibsan kartaa tigidhada "Station kasta Belgian" iyada oo loo marayo Eurostar iyo aad u hesho meel kasta oo dalka ka, Antwerp ka mid ah - qiimo la mid ah sida geeyo si ay u Brussels. Antwerp waxay noqon doontaa mid aad u xiiso dhan ku caashaqay diamond: Antwerp, Belgium faantaa on Degmada Diamond ay taas oo ku faantaa ahaanshaha magaalada halkaas oo qaar ka mid ah goynta ugu gaar ah, nadiifinayo, iyo ganacsiga ee dheeman / GEMS dhacaan.
La xiriir Save A tareenka inay jartaan aad safar tareen meelo Yurub Ieexdo tareen oo waxaan kuu caawin doonaa wixii kharash jaale qaali, nidaamka jaale adag, iyo heerka aan macquul aheyn. Waxaan heysanaa aad tallaabo kasta oo jidka ku qariyeen. Oo, mar walba ee soocaa – Hubi in aad ku raaxaysan raacid tareen oo ka caga aad, qaado wax badan oo photos oo aynu ognahay sida ay wax walba ka tegey!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)